IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၆) – BSI Learning Academy
Home IELTS IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၆)
Admin May 4, 2018 June 28, 2018 IELTS
IELTS Speaking Test မှာ အပိုင်း(၃)ပိုင်း ရှိပါတယ်။ Speaking Part (1) က (၄) မိနစ်မှ (၅)မိနစ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ “IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၅)” မှာ Speaking Part (1) နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပိုင်း (၆) မှာတော့ Speaking Part (2) အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Speaking Part (2) က စုစုပေါင်း (၃) မိနစ်မှ (၄)မိနစ်အထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ Part (1) မေးခွန်များကို မေးပြီးတာနဲ့ Part (2) အတွက် Examiner က အောက်ဖော်ပြပါကဲ့သို့သော Task Card onaParticular Topic ကိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ ဥပမာပြထားတဲ့အတိုင်း Task Card မှာ မိမိပြောရမဲ့ အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပါဝင်သင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထို Task Card နှင့်အတူ Notes ရေးရန် စာရွက်နဲ့ ခဲတံကိုလည်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Task Card ဖတ်ပြီး စဉ်းစားရန်၊ Notes ထုတ်ရန် အချိန် (၁)မိနစ်ပေးပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Task Card မှာ ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ အနည်းဆုံး (၁)မိနစ်ကနေ အများဆုံး (၂)မိနစ်ကြာ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိပြောလို့ပြီးသွားတဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) (၂)မိနစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါ Examiner က Rounding off question တစ်ခု၊ နှစ်ခုလောက် မေးချင်မေးတတ်ပါတယ်။
IELTS Speaking Test Part (2) မှာ မိမိရဲ့ Personal Experience and Life Events အကြောင်းတွေ မေးလေ့ရှိပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ Link မှာ မေးလေ့ရှိတဲ့ Speaking Part (2) Task Cue Cards တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Certified IELTS examiners မှ မိမိ၏ English Speaking Skill ကို အောက်ပါ Criteria (၄)ခု အပေါ်မူတည်ပြီး အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
1. Use 1 Minute Preparation Time wisely. Make short notes.
2. Create an interesting story. It’s best to talk from your personal experience. But, if you don’t have it, you can make it up. Tellingalie is OK.
3. Expand your ideas and give impressive answers.
4. Pay attention to the use of verb tenses. Diversify your grammar and vocabulary.
5. Remember you need to keep talking until the examiner stops you or asks youarounding-off or follow-up question.
** It’s good to haveastudy partner orateacher to practise the Speaking Tests so that you can get feedback. **
May you hit your targets set!
ဥပမာ လေ့လာနိုင်ရန် IELTS Speaking Part (2) practice လုပ်နေတဲ့ videoclip လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၁)
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၂)
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၄)
IELTS လေ့လာဖြေဆိုမယ်ဆိုရင် အပိုင်း (၅)
IELTS, IELTS speaking, IELTS speaking part 2. Bookmark.